Hery Rajaonarimampianina : Hampiharina ny lalàna hiarovana ny harem-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Hampiharina ny lalàna hiarovana ny harem-pirenena
10/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha nandray fitenenana nandritra ny fitokanana ny Tobim-pandanjana fiara vaventy teny Ambohimalaza, eny amin’ny Lalam-pirenena Faharoa (RN2) ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, dia nambarany fa mila hampiharina ny lalàna mba hiarovana ny harem-pirenena.
“Mila mampihatra lalàna isika mba hiarovana ny harem-pirenena sy ny fananam-bahoaka. Volam-bahoaka avokoa no entina manangana ireo fotodrafitrasa isan-tokony, izay tena ilain’ny vahoaka ireo. Na vola indramina izany na volam-panjakana dia volam-bahoaka avokoa. Izany indrindra no mahasarotiny amin’ny fikojana azy ireny”, hoy ny Filoham-pirenena.
Notsindriany fa izany indrindra no tokony hampiharana ny lalàna eto amin’ny tany sy ny firenena. Noho izany, nanao antso avo tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fampiharana tsy misy hatak’andro ny lalàna velona eto Madagasikara. “Rehefa hampiharina ny lalàna, ho foana ny kolikoly eny amin’ireny Lalam-pirenena ireny. Hihena ny lozam-pifamoivoizana, hihena ihany koa ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireny fiara mpitatitra entana ireny, sns”, hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany fa mila mandray andraikitra ny rehetra, ary mandray andraikitra ho amin’ny Fisandratana. “Tonga amin’ny fotoana hihazakazahana amin’ny fampandrosoana isika amin’izao fotoana izao. Maika ny fampandrosoana mba ahafahana mampiakatra ny fari-piainan’ny Malagasy”, hoy izy.
Nambarany fa tsy tanteraka anefa ny fampandrosoana raha tsy misy ny fitoniana. Tsy ho tratra ihany koa ny tanjona sy ny vina izay hapetraka raha tsy misy ny fifanomezan-tanana. Noho izany, nambaran’ny Filoham-pirenena fa tsy fotoana hamerenana ny krizy intsony izao. “Tsy mila korontana ny vahoaka, tsy mila krizy intsony koa ny firenena. Izany ihany no nampitontongana ny toekarem-pirenena tao anatin’izay 50 taona mahery izay. Efa ao anatin’ny Fisandratana tanteraka isika izao, ary anisan’ireo firenena mandroso aty Afrika. Noho izany, izao asa atao izao dia endriky ny fitiavan-tanindrazana koa sahia isika no manangana ny ho avintsika”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, tsy nohadinoin’ny Filohan’ny Repoblika ny mponin’Ambohimalaza fa notolorany omby roa.
Araka ny fampandrenesana avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika dia hanao valandresaka ao amin’ny Colbert Antaninarenina ny filoha Hery Rajaonarimampianina anio amin’ny 11h30. Mazava ho azy fa mifandraika amin’ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana no ho votoatin’izao fanambarana ...Tohiny